Kenya oo Kismaayo ku soo rogtay xayiraad dhinaca duulimaadyada tooska ee Nayroobi | Xaysimo
Home War Kenya oo Kismaayo ku soo rogtay xayiraad dhinaca duulimaadyada tooska ee Nayroobi
Kenya oo Kismaayo ku soo rogtay xayiraad dhinaca duulimaadyada tooska ee Nayroobi
War kasoo baxay Hay’adda Duullimaadka rayidka Kenya ayaa waxaa amaro cusub oo dhinaca duulimaadka ah lagu soo rogay Diyaaradaha ka duula Garoonka Diyaaradaha Magaalada kismaayo ee ku wajahan Magalada Nairobi ee dalka Kenya.
Amarkaan ayaa lagu shaaciyey in Diyaaradaha ka baxa Kismaayo ee ku wajahan Nairobi ay sii maraan Magaalada Wajeer si loogu sameeyo baaritaan la xiriira dhinaca Amniga.
14-kii Bishii la soo dhaafay ee November ee sanadkaan 2019 ayaa kulan ay Magaalada Naiirobi ku yeesheen Madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa ay ku kala saxiixdeen heshiis ku saabsan in Diyaarada ka baxda Muqdisho ay si toos ah u tagto Nairobi.
Intii uu jiray Khilaafka dowladda Federaalka ah iyo Kenya, diyaaradaha ka baxa Kismaayo waxaa ay si toos ah uga dagi jireen Nairobi, waxaana dowladda Kenya sheegtay in hadda laga doonayo in ay maraan Wajeer si loo baaro.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa dhibaato waxaa ay kala kulmaan sii marista Magaalada Wajeer oo si weyn loogu baaro, waxaana dhowr jeer Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay kala saxiixdeen heshiis dhigayey in diyaaradaha ay si toos ah u tagaan Nairobi, balse Kenya ay ka baxday Kenya.